Su'aal: Waxaa laygu sheegay roomatiisam? Lugo iyo Murqo Xanuun?
Author Topic: Su'aal: Waxaa laygu sheegay roomatiisam? Lugo iyo Murqo Xanuun? (Read 4093 times)
« on: October 27, 2014, 02:23:58 PM »
Asc wr wbr marka labaad aad iyo aad baa umahadsantihiin dhamaan dhakhaatiirta halka ugu talagashay inay ugu tabarucaan cilmiga illaahay baray .... Si xushmad leh waxaan dhakhatirka kacodsanayaa inaa inay iga jaahil bixiyaan waxaan kaxanuusanahay lugaha iyo burqaha waxaa laygu sheegay Roomatiisam dawadiisa waxba waa iga tariwaysay waxaan rajaynaa inaad iiga soo jawaab celinaysaan
Re: Su'aal: Waxaa laygu sheegay roomatiisam? Lugo iyo Murqo Xanuun?
« Reply #1 on: October 28, 2014, 11:01:17 AM »
Lafo xanuunka iyo muqo xanuunkaba waxaa keeni karo cudurro badan, mid walibane si gooni ah ayaa loo daaweeyaa, haddii lafahaaga macdanta ku yartahay, haddii lafaha uu caabuq galo, haddii xanuuno kale ay keenaan, iyo hadii dhibaato kale oo lafaha iyo murqaha u gaar ah ay tahayba way keeni karaan xanuunka aad dareemayso.
Tusaale waxaad noo sheegtay in xanuun roomatisam lagaa helay, xanuunka laftirkiisa ayaa fasiraad u baahan dhowr nooc oo roomatisam ayaa jiro, daaweyntane way kala duwanaan karaan, baarista lagugu ogaaday nooceeda inaad noo sheegto way fiicnan lahayd, mida kale xanuun kasta oo lafaha ku dhaco roomatisam maahan.
Si aad u kala barato xanuunada ugu caansan ee ku dhaca lafaha iyo murqahaba, halkaan ka akhriso, haddii faahfaahin dheeraad ah aad u baahan tahay waad na soo weydiin kartaa.
Halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan dhabar xanuunka ama jilba xanuunka si aad fikrad uga qaadato.
Qoraalladaan aad akhrisatid, xanuunka ku hayo kuma garan kartid, waa in aad takhtar u tagtaa, adigoo fikrad ka heysto xanuunada kala duwan.
Views: 15703 August 10, 2015, 11:08:40 AM
Views: 13183 September 16, 2016, 09:11:55 PM
Views: 8898 April 13, 2017, 11:46:51 AM
Views: 24196 March 09, 2011, 10:28:48 PM
Views: 14590 December 23, 2010, 07:28:23 PM